रामेछापबाट आएको बस काभ्रेको चौरी देउरालीमा दु’र्घटना ! – Khabarhouse
रामेछापबाट आएको बस काभ्रेको चौरी देउरालीमा दु’र्घटना !
Khabar house | २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०९:४३ | Comments
काभ्रे : काभ्रेको कोशीपारीमा बस दु’र्घटना हुँदा २५ जना घा’इते भएका छन्। रामेछापको गुराँसेबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा ४ ख ७१०२ नम्बरको बस काभ्रेको चौरी देउरालीमा दु’र्घटना भएको हो। साइड दिने क्रममा बस दु’र्घटनामा परेको स्थाीय सुसन सापकोटाले जानकारी दिए।
घा’इतेहरु मध्ये ग’म्भीर घा’इते ६ जनालाई चौरी देउराली गाउँ पालिकाको गाडीमा तथा अन्य लाई बसमा धुलिखेल अस्पताल ल्याउँदै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेले जनाएको छ । अहिले स्थानीय प्रहरी उ’द्धार कार्यमा जु’टि रहेको भइएरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेका डिएसपी विक्रम थापाले जानकारी दिए ।
उ’द्धार जारी रहेकोले घा’इते थपिन सक्ने डिएसपी थापाले बताए। दु’र्घटना पश्चात फ’रार रहेका बसका चालक अहिले टेलिफोन स’म्पर्कमा आइसकेको र दु’र्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक झाले बताए । सडकदेखि २० मिटर तल खसेर दु’र्घ टना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कात्तिके देउरालीका प्रहरी निरीक्षक पवनकुमार झाले बताए ।
१ दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनेकी १९ वर्षकी छात्राले आफ्नो कार्यकालमा के-के काम गरिन् ?
ताइवानको आकाशमा चीनले पठायो यु’द्ध विमान
मैले भन्दै नभनेको कुरा दुष्प्रचार गर्ने को हो ?
भारतले सधैँका लागि बन्द गरिदियो टिकटक सहित ५९ चिनियाँ एप
बागलुङमा हात्तीपाइले रोग चुनौतीका रूपमा खडा, पुनः भेटियो जीवाणु